Uhuru Kenyatta oo la maxkamadeynayo - BBC Somali
Uhuru Kenyatta oo la maxkamadeynayo
8 Oktoobar 2014
Image caption Uhuru ayaa hadda si ku meel gaar ah xilka ugu wareejiyay ku xigeenkiisa.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta oo arbaca ah lagu wadaa in uu ka soo hor muuqdo maxkamadda caalamiga ee dambiyada, halkaasi oo uu ku wajahayo eedeymo la xiriira dambiyo ka dhan ah aadanaha.
Uhuru ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay oo isaga oo xil haya la horgeeyo maxkamaddaasi.
Mr Kenyatta ayaa looga yeeray maxkamaddani kaddib markii dacwad oogeyaasha maxkamaddani ay ku eedeeyeen dowladda Kenya in ay ku guul dareysatay in ay u soo gacan geliso caddeymo muhiim ah oo ay doonayaan in ay ku xoojinaya dacwadda ka dhanka ah Uhuru Kenyatta.
Madaxweyne Kenyatta iyo ku xigeenkiisa William Ruto ayaa labaduba lagu eedeeyay in ay dhaqaalo ku bixiyeen isla markaana ay soo abaabuleen rabshadihii ka dhashay doorashadii lagu murmay ee sanadkii 2007.